မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 47
သတ္တ၀ါတွေဟာ ကံတရားကိုယ်စီနဲ့ ခရီးသွားနေကြတာဖြစ်တယ်။ သူလဲ သူ့ကံနဲ့ သူ၊ ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ကံ နဲ့ကိုယ် ကံကိုယ်စီ ပါနေကြတယ်။ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံက ကိုယ့်ထံသာ ပြန်လာလိမ့်မယ်။ ကောင်းတဲ့ကံကလဲ ပြန်လာမှာပဲ။ မကောင်းတဲ့ကံကလဲ ပြန်လာမှာပဲ။ အချိုပင်စိုက်ရင် အချိုသီး သီး၍ အချဉ်ပင်စိုက်ရင် အချဉ်သီးသီးသလို။ ဒါက ဘုရား ပေးတဲ့ဥပမာ။ (ယာဒိသံ ၀ပတေ ဗီဇံ၊ တာဒိသံ ဟရတေ ဖလံ။) ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က ကံနဲ့ စပ်လို့ မိန့်တော်မူတာက ကိုယ်လုပ်ခဲ့သမျှ ကိုယ်ပြန်တွေ့နေရတာပါပဲတဲ့။ (ယာနိ ကရောတိ ပုရိသော၊ တာနိ အတ္တနိ ပဿတိ။) ဒါပေမယ့် ကံသဘောတရားက ဆန်းကြယ်တယ်။ အခုလုပ်တယ်။ အခုတွေ့ချင်မှတွေ့ရတာ။ ချက်ချင်း လက်ငင်း အကျိုးပေးတာမျိုးလဲရှိ၊ မပေးတာမျိုးလဲရှိတယ်။ ယခုဘ၀မှာတင် ချက်ချင်း အကျိုးပေးတာမျိုး ကျတော့ ဒိဋ္ဌဓမ္မလို့ ဆိုပါတယ်။ […]
စေတနာကို ကံလို့ခေါ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ စေတနာတိုင်းတော့ ကံမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မနေ့ကပြောခဲ့ပြီ။ ကောင်းတဲ့ စေတနာက ကုသိုလ်စေတနာ၊ မကောင်းတဲ့စေတနာက အကုသိုလ်စေတနာလို့ပဲ ပေါင်းမှတ်လိုက်ရင် ပိုလွယ် ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုခွဲခြားမသိတော့ `ငါက မင်းကို စေတနာနဲ့ ပြောနေတာ´ လို့ပြောနေကြတယ်။ သူ့စေတနာက ကောင်းနေရင် တော်သေး။ မကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ ပြောနေရင် မခက်ဘူးလား။ စေတနာက ကောင်းတဲ့စေတနာလဲ ရှိ၊ မကောင်းတဲ့ စေတနာလဲ ရှိတာကိုး။ စကားပြောတဲ့အခါ အချို့က မကောင်းတဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီလူ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် အဟုတ်မှတ်ပြီး လုပ်မယ်၊ လုပ်ရင် ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့ စေတနာမျိုးကျတော့ မကောင်းတဲ့ စေတနာပေါ့။ ဒါကို စေတနာမမှန်ဘူးလို့တော့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် `ကိုယ်က စေတနာနဲ့ပြောတာပါ´ ဆိုရင် ကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့လား၊ မကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့လားဆိုတာ ချင့်ချိန်သင့်တယ်။ စေတနာနဲ့လို့ ပြောတိုင်း အကောင်းမထင်လိုက်နဲ့။ […]
ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ၏ ကုသိုလ်မှတ်တမ်း ၁။ (၀၂-၁၁-၂၀၀၄)ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်အား သိက္ခာထပ်ရဟန်းဒကာ ရဟန်းဒကာမ များဖြစ်ကြသော ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်နေ ဦးသိန်းဝေ+ ဒေါ်ခင်လှကြည်မိသားစုတို့နှင့်အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ငှက်ပျောခြံ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မဟာနန္ဒာရာမ ကျောင်းတိုက်၌ ကထိန်အလှူကို ကျင်းပ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ သံဃာ (၄၅)ပါးပင့်၍ လှူဖွယ်ဝတ္ထုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ရွာပေါင်း (၄)ရွာမှ လာသမျှ ပရိတ်သတ်တို့အားလည်း နေ့လည်စာဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့သည်။ ၂။ (၂၀၀၄-၂၀၀၅) ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ငှက်ပျောခြံရွာ၊ ကံသာရွာ၊ အင်ပင်ရွာ သုံးရွာမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား (၁၀)တန်းအောင်လျှင် တစ်ယောက် (၁၀၀၀၀)ကျပ်နှုံး ဖြင့်ဆုချီးမြှင့်၍ ဂုဏ်ထူးပါလျှင် ဂုဏ်ထူးတစ်ဘာသာ (၃၀၀၀)ကျပ်စီ ထပ်မံ၍ ဆုတော်ငွေ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းပင် ဆုတော်ငွေ များကို နှစ်စဉ် ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ ၃။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်မှ စ၍ ပညာလိုလား၍ […]
မြကျွန်းသာ မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ၁။ (၁၁-၀၇-၂၀၀၉) ရက်နေ့မှ (၂၀-၀၉-၂၀၀၉)ရက်နေ့အထိ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ၌ ၀ါတွင်းကာလဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း ပထမအဆင့်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ (၁၁) ယောက်ရှိ၏။ (၂၆-၀၉-၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် အောင်လက်မှတ်နှင့် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပ ခဲ့သည်။ ၂။ (၁၈-၁၀-၂၀၀၉)ရက်နေ့တွင် မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ၌ လွင်ဦးထွေး အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမီတက်ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းလွင်ဦး+ဒေါ်မိမိထွေး မိသားစုတို့မှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ ၃။ (၁၁-၀၄-၂၀၁၀) ရက်နေ့မှ (၂၀-၀၄-၂၀၁၀) ရက်နေ့အထိ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ၌ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် (၁/၂၀၁၀) မိုးကုတ်ဝိပဿနာအလုပ်သင် (၁၀)ရက်တရားစခန်းကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယောဂီဦးရေ (၁၄၀) ၀င်ရောက်တရားထိုင်ကြသည်။ ၄။ (၀၁-၀၅-၂၀၁၀)ရက်နေ့တွင် မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ၌ အလျားပေ(၆၀)၊ အနံ(၃၅) ပေရှိ သုံးထပ်ယောဂီဆောင်ကြီးကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ အများပြည်သူကောင်းမှုဖြင့်ပေါင်းစု၍ ဆောက်လုပ် […]
မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းအကြောင်းမှာ အောင်ဆန်း ဆရာတော်၏ ကျေးဇူးလည်းမကင်း။ မှော်ဘီမှာရှိသည့် ကြည်အေးမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ၏ လမ်းပြလည်းပါ၏။ မြောက်ဥက္ကလာ၊ မြရတနာ(၁)လမ်း၊ ´ဦးလှကြည်မိသားစု´ သစ်စက်ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြသော ကျောင်းဒါယ ကာကြီး ဦးလှကြည် + ကျောင်းဒါယိကာမကြီး ဒေါ်အေးအေးသွယ်တို့သည် အောင်ဆန်းဆရာတော် ဖွင့်လှစ်သော မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းတွင် တရားဝင်ခဲ့ကြဘူးသော ယောဂီများဖြစ်ကြ၏။ အောင်ဆန်း ဆရာတော်၏ တပည့်များဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုရမည်။ သို့သော် လက်ရင်းဆရာမှာ မြကျွန်းသာလူမျိုးစု ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလဗုဒ္ဓိ ဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းတိုက်တွင် ၂၀၀၁-ခုနှစ်က သိမ်တိုက်တစ်လုံး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ဘူးသည်။ အောင်ဆန်းဆရာတော်ထံမှ မိုးကုတ်တရားထိုင်နည်းများ ဆည်းပူရရှိ လာခဲ့သောအခါ မိုးကုတ်တရားစဉ် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေးကို စိတ်အားသန်လာခဲ့ကြသည်။ ကြည်အေးမိုးကုတ်ရိပ်သာသို့လည်း မကြာခဏ ရောက်ဘူးကြသဖြင့် ထိုရိပ်သာတွင် ကြည်အေး မိသားစုတို့က ကမကထပြု၍ ရိပ်သာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုလည်း […]
မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ(တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးဌာန) ပဓာနနာယကဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်းချုပ် ၁။ ဘွဲ့- အရှင်ပါရမီ ၂။ အသက်-(၄၂)နှစ်၊ သိက္ခာ(၂၂)၀ါ ၃။ မွေးသက္ကရာဇ်-၁၃၃၂-ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလဆန်း(၆)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်(၉)ရက် ၄။ ဇာတိ- အင်ပင်ရွာ၊ ငှက်ပျောခြံကျေးရွာအုပ်စု၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၅။ မိဘ- ဦးဟန်ပို+ဒေါ်ခင်မိ၊ အင်ပင်ရွာ ၆။ ရဟန်းဒါယကာ- တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥတ္တမသာရ၊ လုံပီးရွာ၊ ဖလမ်းမြို့ နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ၇။ ရဟန်းဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ- ဦးသုတေသန၊ ရွှေတောင်ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၈။ (၂၇-၀၆-၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာ ဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခြင်းခံရသည်။ ၉။ ပညာအရည်အချင်း – သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ၊ B.A. (Buddhism), M.A. (Buddhism) (MDY), PhD (ITBM […]
မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းဖွင့်ရက်ကြေငြာချက် xxxxxxxxxxxxxx ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ သုနန္ဒာလမ်းမကြီး၊ ရတနာကျွန်း၊ မြကျွန်းသာ မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ၌ ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဥပနိဿယအတိုင်း (၄/၂၀၁၁) အကြိမ်သင်္ကြန်တွင်း မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အလုပ်သင် (၁၀)ရက် အထူး တရားစခန်း ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားစခန်းဝင်လိုသူယောဂီများ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ ယောဂီဦးရေ အကန့် အသတ် ရှိသည်။ လူယောဂီ (၁၃၀)၊ ဒုလ္လဘယောဂီ (၂၀) သာလက်ခံမည်။ နေ့ဆွမ်း၊ အရုဏ်ဆွမ်း ကပ်လှူလိုသူများလည်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ။ နေ့ဆွမ်း – ၁၆၀၀၀၀ ကျပ် အရုဏ်ဆွမ်း – ၈၀၀၀၀ ကျပ် တရားစခန်းရက်- (၁၂ – ၀၄ – ၂၀၁၁) ရက်နေ့မှ (၂၁ – ၀၄ – ၂၀၁၁) ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ […]
Page 47 of 51« First...203040«4546474849»50...Last »